Farany dia tonga ny revolisiona sivilizasiôna Sid Meier 2 | Androidsis
Iray amin'ireo paikady manan-danja indrindra sagas tonga amin'ny Android ihany miaraka amin'ny Revolution Revolution 2 an'i Sid Meier. ny zava-drehetra lalao midadasika ho an'ny Android ary namboarina tsara mba hiasa amin'ny finday roa sy ny takelaka.
Na dia efa tonga tao amin'ny iOS aza ity lohateny ity volana vitsivitsy lasa izay, izao no fotoana mety hankafizana ny paikady tsara indrindra sy mivoatra ny sivilizasionao amin'ny alàlan'ny Android malalanao, eny an-dalana, raha miaraka amin'ny Nexus 9 tsara kokoa noho ny tsara kokoa.
1 Tonga tao amin'ny Android i Sid Meier
2 Mamorona fanjakana iray, manapaka ary alaivo an'izao tontolo izao
3 Ny halehiben'ny sivilizasiôna amin'ny Android
Tonga tao amin'ny Android i Sid Meier
Malahelo azy izahay, lalao video amin'ity andiany paikady ity izay nitondra fialamboly sy fialamboly be dia be tamin'ireo mpilalao maro samihafa ary tonga amin'ny Android araka ny tokony ho izy. Amin'ny fahafenoany rehetra, miaraka amina sary goavambe, traikefa nahafinaritra kokoa ary tetikady tsara kokoa.
Ny anaram-boninahitra voalohany namboarina momba ny franchise sivilizasiôna ary izany dia noforonina manokana ho an'ny finday. Miomàna hamorona ny fanjakanao mba hanjakazakan'ny planeta iray manontolo ary apetraho eo an-tongotrao ny olombelona rehetra, satria io no tanjona lehibe amin'ny Tolom-bahoaka 2.
Mamorona fanjakana iray, manapaka ary alaivo an'izao tontolo izao
ny endri-javatra manan-danja ny Revolisiona sivilizasiôna 2 dia:
Sivilizasiôna vaovao: Korea
Mpitondra vaovao: Lenin ny Kaominista Rosiana, Mpanjaka Sejong ao amin'ny Choson
Fitaovana vaovao- Ampitomboy ny herinao ara-tafika miaraka amin'ireo tarika mpiady vaovao, ao anatin'izany ireo mpitatitra fiaramanidina, mpiady jet ary miaramila an'habakabaka Operations manokana
Teknolojia vaovao- Mahatratra ny fahamboniana siantifika amin'ny teknolojia vaovao toy ny laser, fitsaboana maoderina ary teknolojia fampahalalana
Trano sy fahagagana vaovao- Mitombo sy manitatra ny sivilizasiona tsy mbola nisy toy izany tamin'ny alàlan'ny trano vaovao sy zava-mahatalanjona, ao anatin'izany ny toby nokleary, ny Vokovoko Mena ary ny Silicon Valley
Sary 3D nohatsaraina- Sary 3D nohavaozina izay manararaotra tsara ny fahaiza-manaon'ny sary ao amin'ny fitaovana iOS
Fanamby amin'ny scénario- Avereno jerena ny tantara sy ny ady amin'ny Mode Scenario
Ny halehiben'ny sivilizasiôna amin'ny Android
Ny fananana lalao toy ny sivilizasiôna amin'ny Android dia midika fotoana fialan-tsasatra mandritra ny ora maro diniho ny halalin'ny atolotry ny lalao video toa izao. Izay rehetra mamaky anay ary nilalao sivilizasiona tamin'ny fotoana sasany dia hahafantatra izay lazaiko. Tsy dia manam-potoana hitantanana ireo singa rehetra toy ny politika ianao, ny fanafihana, ny fanatsarana ny renivohitra, ny fandresena ary ny asa hafa amin'ny andiany sivilizasiona. Ny fananana azy ankehitriny amin'ny takelaka voavoatra sary dia lafo vidy.
Ny kilema ananan'ity lohateny ity dia ny vidiny lafo. Mety ho mendrika izany satria amin'ny € 14,42 dia manana ny atiny rehetra ianao nefa tsy misy karazana doka na fividianana ao anaty ny fampiharana, fa azo antoka fa maro no handao ny fividianana azy satria tena tsy fahita firy ny mahita lalao amin'ity vidiny ity. Tsy milaza aho fa tsy mendrika azy ireo izany, fa saika 15 euro ny vidiny lafo, na izany no lalao tsara indrindra teo amin'ny tantara, miaraka amin'ny fitaovana finday isika.
Na izany aza, lalao tokana io amin'izao fotoana izao amin'ny Android sy izany tonga mba ho lasa iray amin'ireo fividianana tsara indrindra izay azontsika atao anio ao amin'ny Play Store. Ny zava-drehetra momba azy dia avo lenta.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Mamorona ny fanjakanao amin'ny Sid Meier Civilisation Revolution 2 izay azo alaina amin'ny Android izao
Paco crespo dia hoy izy:
Aleoko mandoa € 14 ary manana ny lalao tsy misy fividianana anatiny toy izay mandoa vola kely isaky ny afaka mandroso, toy ny amin'ny Diablo ... Ny XCOM koa dia lafo ary mahafaly ny milalao, raha nisy raha nividy micro-buying dia ho nomen'izy ireo ho any
Valiny amin'i PAco Crespo
Miaraka aminao aho amin'ireo, fa ny maodely Freemium tsy mijanona
Paulo carrasco dia hoy izy:
Notsofiko mba hilalaovana azy amin'ny takelaka xperia z-ko nefa nianjera…. Manomboka milalao azy io aho ary mihomehy…. Tsy haiko raha olan'ny kinova na kely ny takelaka misy ahy ... satria hoy ny tsikera Android market dia nilaza izy ireo fa mihabe ny olana .... ry namana manantena ny fanampianao
Mamaly an'i Paulo Carrasco
Hiandry kinova vaovao hamaha ireo olana ireo izahay!
Ny sary voalohany an'ny Android 5.0 Lollipop ao amin'ny LG G3, fomba tsara handefasana vaovao farany!